दूर्जेय 8/5/09 10:23 PM
कृष्णपक्ष उज्यालोको खोजिमा 9/5/09 1:24 AM
शेखर के सी 9/5/09 2:05 PM
आकार 9/5/09 4:19 PM
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) 9/5/09 10:16 PM
परिवर्तित नेपाली को जीवन शैली नि हजूर ...............
Prabesh Poudel 10/5/09 7:34 AM
सिकारु 10/5/09 11:51 AM
cheeju 10/5/09 3:14 PM
प्रबिण थापा 12/5/09 10:24 PM
दीपक जडित 13/5/09 4:31 AM
माथी आकारजीकै कुरामा सहमत - धेरैले वास्तै नगरेको तर गहिरो असर पारिसकेको विषमा लेख्नुभएको छ यो कथा । ( पढेको पहिले नै हो बल्ल कमेण्ट लेख्दैछु ! अल्छे भा'छु म । )
Kamaladi 13/5/09 6:55 PM
Anonymous 14/5/09 8:39 AM
Onlinekhaskhas 23/5/09 7:15 PM
मलाई त कसैको कमेन्ट पनि ठिक लागेन् । एउटा कथाको आडमा आएर किन धर्मलाई दोष दिने र ? के धर्मले मान्छेलाई बिर्गाछ र ? ब्रि्रने,चासो लिने, लिने कुरा त मान्छेमा भर पर्छ होइन र ?
Dilip Acharya 23/5/09 8:16 PM
हुन त तपाइले 'कमेण्ट ठिक लागेन' भन्नु भएको छ, त्यस अर्थमा मैले जबाफ दिनु पनि अप्रासंगीक हुन जान्छ ।
तर जहाँसम्म कथाको कुरा छ मैले कथामा भने कुनै धर्मले मान्छे बिगार्‍यो भन्ने आशय व्यक्त गरेको छैन ।
यो कथा 'परिवर्तन'को बारेमा हो, आफ्नोपन गुमाउने संघारमा पुगेको नेपाली मौलीक संस्कृतिको बारेमा हो ।
कुनै पनि धर्मले मान्छेलाई बिगार्दैन भन्ने बारेमा बिबाद गर्नु मलाई पनि आवश्यक लाग्दैन । तर समग्रमा सञ्चार क्षेत्रको असिमित बिकास र पश्चिमि संस्कृतिको आयातसंगै हाम्रो संस्कृतिको मौलिकतामा परिरहेको प्रतिकूल असरलाई नकार्नु र हेरक परिवर्तन सहि नै हुन्छ भन्नु पनि त्यत्तिनै गलत हुने छ।
मलाई लाग्छ तपाई पनि मेरो कथाको पात्र जस्तै व्यक्तिले नेपालको प्रतिनिधित्व गरोस भन्ने पक्कै चाहनु हुँदैन :)
रचनात्मक टिप्णिको लागि धन्यवाद ।